Boqor ka qayb galay bandhigga buugaagta ee Hargeysa - BBC News Somali
Boqor ka qayb galay bandhigga buugaagta ee Hargeysa
Kenya oo dumin ka billawday xaafad isku raran ah
Madaxweyne ku-xigeenka Comoros oo ka badbaaday isku day dil
Al Shabaab oo weerartay Baar Sanguuni
Posted at 16:48 23 Jul 201816:48 23 Jul 2018
Waxaan idin kaga tageynaa sawirka muujinaya neef ari ah oo socda gudaha magaalada Hargeysa, Weriyaha BBC-da Mary Harper oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa kusoo warramaysaa in neefafka ariga ee ku sugan gudaha magaalada Hargeysa xitaa ay ka badan yihiin dadka.
Mary HarperCopyright: Mary Harper
Posted at 15:37 23 Jul 201815:37 23 Jul 2018
Dowladda Suuriya oo caambaareysay daadgureynta kofiya cad
Xubnaha koofiya cad ayaa ka howlgalaa magaalada Aleppo ee waqooyiga SuuriyaImage caption: Xubnaha koofiya cad ayaa ka howlgalaa magaalada Aleppo ee waqooyiga Suuriya
Dowladda Suuriya waxay caambaareysay dadaalka lagusoo daadgureeyay kooxda loo yaqaano kofiya cad ee dalka Suuriya oo ku go’doonsanaa koonfurta dalkaasi, xukuumadda Dimishiq waxay ku tilmaantay tallabaada lagu soo daadgureeyay kooxdani’ howlgal dambi ah’ oo ay wadeen Israa’iil iyo xulafadooda.
In ka badan 400 oo kamid ah kooxda kofiya cad ee ka shaqayso badbaadinta shacabka Suuriya iyo qoysaska ayay militariga Israa’iil kasoo daadgureeyeen halkaasi.
Afahayeen u hadlay laanta qaxootiga ee Qaramada midoobay Francesco Bert ayaa xaqiijiyay in UNHCR ay kala shaqaynayso dowladda Urddun iyo dalalka reer galeedka sidii dib u dejin loogu samayn lahaa shacabkaasi.
Posted at 14:58 23 Jul 201814:58 23 Jul 2018
Xulalka Eritrea iyo Itoobiya oo ay dhexmari doonto cayaar saaxibtinimo
Waa caayartii ugu horreysay ee dhex mari doonto xulalka Eritrea iyo Itoobiya tan iyo sannadkii 1998-diiImage caption: Waa caayartii ugu horreysay ee dhex mari doonto xulalka Eritrea iyo Itoobiya tan iyo sannadkii 1998-dii
Xiriirada kubadda cagta ee Itoobiya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyay inay qaban doonaan caayaar taarikhii ah oo saaxibtinimo oo dhex mari doonto xulalka labada dal.
Xulalka kubadda cagta ee Itoobiya iyo Eritrea ayaa bisha nagu soo aadan ku cayaari garoonka kubadda cagta ee magaalada Asmara.
Xulalka labada dal ma aysan cayaarin tan iyo sannadkii 1998-dii oo ay jireen dagaalladii xadka.
Xulka Itoobiya ayaa qaadacay cayaar ay la yeelan rabeen xulka Eritrea sannadkii 2000 iyo cayaaraha bariga Afrika ee CECAFA sannadkii 2010-kii ee lagu qabtay magaalada Asmara.
Balse xulka Eritrea waxay ku guuldaraysteen inay qayb galaaan cayaaraha CECAFA ee sannadkii 2015-kii.
Tabbabaraha cusub ee Xulka Itoobiya Abraham Mebratu ayaa la filaya inuu shaaca ka qaado taarikhda rasmiga ah ee cayaarta la qaban doono.
Posted at 13:43 23 Jul 201813:43 23 Jul 2018
Boqor Axmed Iimaan iyo boqor kale oo reer South Suudaan ah oo ka qayb galayay munaasabadda bandhiga buugaagtaImage caption: Boqor Axmed Iimaan iyo boqor kale oo reer South Suudaan ah oo ka qayb galayay munaasabadda bandhiga buugaagta
Weriyaha BBC-da Mary Harper ayaa soo qaaday sawirka labo boqor oo ka qaybgalayay munaasabadda bandhigga buugaagta Hargeysa.
Waxayna kamid tahay bandhigyada carwada suugaanta ee bariga Afrika.
Boqorka beesha Gabooye ,Axmed Iimaan Warsame ayaa kamid ahaa dadkii ka qayb galay bandhigga buugaagta.
Weriyaha ayaa intaasi ku dartay in kaarka uu ku galayay munaasabadda ay ku qornayd ‘Boqorka geeska Afrika’
Waxaana sawirka sidoo kale ka muuqdaa boqor ka socdo beel degto koonfurta Suudaan oo lagu marti qaaday munaasabadda.
Posted at 12:47 23 Jul 201812:47 23 Jul 2018
Ciidamada Mali oo sheegay inay dileen maleeshiyaad ka dagaallama dalkaasi
Webiga Niger ayaa maraa meel 10 kilomitar u jirta gobolka Soumouni ee dalka MaliImage caption: Webiga Niger ayaa maraa meel 10 kilomitar u jirta gobolka Soumouni ee dalka Mali
Saraakiisha ciidamada ee ku sugan dalka Mali ayaa sheegay inay dileen 11 kamid ah dagaallamayaal ka tirsan maleeshiyaad islaamiyin ah.
Militariga Mali ayaa intaasi ku daray in weerarka ay ku qaadeen goob ay weerarada kasoo qaadi jireen.
Afahayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Mali ayaa sheegay in weerarka ay ka fuliyeen kaynta Soumouni oo ku taalla gobolka segou ee dalkaasi islamarkaasna uu kaga dhintay hal askari.
Dalka Mali ayaa filaya in Axadda nagu soo aadan ay ka dhacdo doorasho balse waxaa laga cabsi qabaa inay saamayn ku yeelato ammni darrada halkaasi ka jirto.
Posted at 12:28 23 Jul 201812:28 23 Jul 2018
Al shabaab oo sheegatay in ay askar badan laysay
Ururka Jihaaddoonka ah ee Al Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidammada dawladda Faderaalka Soomaaliya iyo kuwo dawlad goboleedka Juba ku lahaayeen Baar Sanguuni.
Gaari ayaa lagu qarxiyay xerada ka dibna weerar ayaa lagu qaaday.
Af hayeen u hadlay Shabaab ayaa sheegay in 27 askari ku dileen weerarka, mana aysan sheegin wax khasaare ah oo xagooda soo gaaray.
Sheegashadaas si madax bannaan looma xaqiijin karo.
Xaaladda deegannadaas ayaa dagan waxaana gaaray ciidammo gurmad ah oo Kismaayo ka tagay iyo masuuliyiin sare oo reer Jubaland ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Maxamuud Sayid Aadan.
Taliyaha ciidammada gobolka Jubbada Hoose Maxamed Naasir oo ka mid ahaa saraakiisha gaaray Baar Sanguuni ayaa BBC-da u sheegay in ay jabiyeen Shabaab ayna ka dileen in kabadan boqol askari, iyaga ay ka dhinteen labo askari saddexna ay ka dhaawacmeen.
Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska oo lagu dhagan yahay
Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gérard CollombImage caption: Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gérard Collomb
Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska waxaa su’aalo weddinaya xubnaha baarlamaanka dalkaasi oo ku aadan dhacdadii mid kamid ah ilaalada madaxweynaha uu ku garaacay qof dibadbaxy ka qayb qaadanayay bishii 1-dii bishii May.
Wasiirka arrimaha gudaha Gérard Collomb wuxuu sheegay in muuqaalka uu arkay 2-dii bishii May balse ma uusan ku wergelinin dacwad oogayaasha dalkaasi sababtoo ah wuxuu yiri waa arrin khuseesay shaqaalaha madaxweyne Macron.
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa shaqada ka ceeyriyay Alexandre Benalla Jimcihii.
Xildhibaanada baarlaamanka Faransiiska ayaa doonaya sababta wasiirkan uusan tallaabo uag qaabin Benalla.
Posted at 11:42 23 Jul 201811:42 23 Jul 2018
Mid kamid ah madaxweyne ku-xigeennada dalka Comoros ayaa ka badbaaday isku day dil maalmo uun ka hor aftida isbaddallada lagu samaynaya dastuurka dalkaasi.
Dablay ayaa xabado ku furay baabuur madaxweyne ku-xigeenka Moustoidrane Abdou wuxuuna kasoo laabanayay gurigiisa oo ku yaalla jasiiradda Anjouan.
Dalka Comoros ee ku yaalla Badweynta HinddiyaImage caption: Dalka Comoros ee ku yaalla Badweynta Hinddiya
Cid ku dhaawacantahay ma jirto weeraka saaka dhacay balse burbur ayaa soo gaaray baaburka madaxweyne ku-xigeenka.
Weerarkan ayaa imaanaya xilli la filayaa in dalka Badweynta Hindiya ku yaalla ee Comoros ay ka dhacdo afti isbaddallo lagu samaynaya dastuurka.
Haddii dadweynaha ay u codeeyaan ‘haa’ waxay u ogolaanaysa madaxwewyne Azali Assoumani inuu sannooyin badan uu dalkaasi kasii taliyo iyo in meesha laga saaro jagada madaxweyne ku-xigeenada
Posted at 11:26 23 Jul 201811:26 23 Jul 2018
Dawladda Kenya ayaa dumin ka billawday xaafadda isku raranta ah ee Kibera.
Waa mid ka mid ah isku rarannada ugu wayn qaaradda Afrika.
Xiisadda ayaa aad u kacsan ka dib markii ay dawladdu billawday in ay dhulka la sinto guryo, iskuullo iyo ganacsiyo.
Arrintan ayaa salka ku haysa qorshe ay dawladdu ku ballaarinayso waddooyinka magaalada si loo kala fududeeyo cadaadiska magaalada ka jira.
Dadkan intooda badan si sharci darro ah ayay dhulkaas isaga dageen balse waxay u arkaan in tallaabada dawladdu ay tahay mid banii’aadannimada ka baxsan, waxayna dalbanayaan in dib u dajin loo sameeyo ama magdhaw la siiyo.
Hoos ka daawo muuqaal laga duubay duminta guryaha xaafadan ay dadka danyarta ah ku badan yihiin.
Posted at 11:06 23 Jul 201811:06 23 Jul 2018
UK oon dil ka badbaadinaynin rag Dawladda Islaamka ka tirsanaan jiray
Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Sajid Javed ayaa u sheegay Maraykanka in dalkiisa uusan is hortaagi doonin in lagu fuliyo dil labo nin oo lagu eedeyay in ay xubno ka ahaayen kooxda Dowladda Islaamka.
Waxaa la rumeysanayahay in uu dhambaal u diray masuuliyiinta Maraykanka kaa oo u ku sheegayo in Britain ay ka caawini doonto Maxkamadeeynta labo xubnood oo ka tirsan kooxda la baxday beatles gang, kuwaas oo la rumeysanyahay inay ku lug lahaayen gabood faladii ugu xumaa ee abid ka dhaca dalka suuriya.
Alexanda Kotey (bidix) iyo El Shafee ElsheikhImage caption: Alexanda Kotey (bidix) iyo El Shafee Elsheikh
Posted at 10:25 23 Jul 201810:25 23 Jul 2018
Shirweynaha cilmibaarista Soomaalida
Xarunta Jaamacadda Hargeysa waxaa saaka ka furmaya shirweynaha caalamiga ah ee daraasaadka Soomaalida, kaas oo saddexdii sanoba mar la qabto.
Madashaasi ayaa 40 sano ka hor waxaa lagu aasasay magaalada muqdisho waa 1978.
Shirweynahan waxaa ka qeybgalaya ilaa 150 aqoonyahan oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib qaaradaha caalamka ka kala yimid.
In ka badan 60 daraasadood oo ku saabsan taariikhda Soomaalida, dhaqanka, afka, suugnaanta iyo xaaladda siyaasadda ayaana lagu soo bandhigayaa.
Si aad u hesho xog intan ka sii faahfaahsan lifaaqan guji.
Posted at 10:02 23 Jul 201810:02 23 Jul 2018
Bandhigga ganacsiga dumarka ee Garoowe
Magaalada Garoowe waxaa maanta ka billawday shirka ganacsiga ee haweenka Puntland.
Shirkan oo ah kii koobaad ee noociisa ah ee Puntland ka dhaca waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Dawlad goboleedka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar.
Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada uu soo qaaday wariye Axmed Cawil.
Posted at 8:53 23 Jul 20188:53 23 Jul 2018
Dad loo xirxiray ilmo saddex jir ah oo aysiidh lagu weeraray
Saddex nin ayaa la xiray ka dib markii wiil yar oo saddex jir ah uu dhaawac halis ah ka soo gaaray wax loo malaynayo aysiidh lagu weeraray.
Wiilka ayaa “si ula kac ah loo weeraray” isaga oo ku sugan gurigooda oo ku yaalla magaalada Worcester ee dalka Britain, sida ay booliisku sheegeen.
Ragaas oo da’doodu kala ahayd 22, 25 iyo 26 ayaa lagu xiray magaalada London iyaga oo looga shakiyay in ay maleegayeen in ay jismi ahaan dhibaato u gaarsiiyaan dad.
Wiilka ayaa isbitaalka laga saaray ka dib markii laga daweeyay dhaawac halis oo ka soo gaaray aysiidha iyadoo ay wajiga iyo gacmuhu murxeen.
“Dhibaatada dhaawacyadan ay wiilka u keensan karaan mustaqbalka ayaan caddayn.
Booliisku waxay sheegeen “in aysan caddayn” ujeedada laga lahaa dhibaatada loo gaystay wiilkaas yar.
Posted at 8:10 23 Jul 20188:10 23 Jul 2018
Trump iyo Xasan Rawxaani oo isu hanjabay
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo dhiggiisa dalka Iiraan Xasan Rawxaani ayaa hanjabaado is waydaarsaday, iyadoo xiisadda labada dal u dhaxaysa ay cirka isku sii shareerayso.
Trump ayaa Twitterka ku soo qoray in Iiraan “ay wajihi doonto saamayn ay yartahay in la helo dad wajahay marka taariikhda dib loo fiiriyo” haddii ay halis ku noqoto Maraykanka.
Xasan ayaa isna mar hore sheegay in weerar lagu qaado Iiraan uu noqon doono “hooyadii weerarrada”
Bishii May ayuu Maraykanku ka baxay heshiis hoos u dhigay hawlihii nukliyeerka ee Iiraan, arrintaas oo lagaga baddashay in lagaga qaado cunaqabatayntii caalamiga ahayd.
Maraykanka ayaase hadda dib u soo celinaya cunaqabatayntaas, inkastoo ay ka soo horjeedsadeen UK, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo Jarmalka kuwaas oo dhammaantood sixiixay heshiiskii 2015kii.
Posted at 6:41 23 Jul 20186:41 23 Jul 2018
Trump-ka Brazil oo isa soo sharaxay
Jair Bolsonaro oo ah siyaasi reer Brazil ah oo siyaasaddiisu garabka midig ee fog raacsan tahay ayaa ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay doorashada madaxweynenimada ee bisha Oktoobar la qaban doono.
Jair oo saddex xidigle ka soo noqday ciidamma ayaa doonaya in uu sahlo qoryaha in si sharci ah loo haysto si uu wax uga qabto falal dambiyeedyada.
Dadka dhaliishan waxay ku sheegaan in uu aad ugu ol’oleeyo siyaasadda midig uuna aflagaadeeyo dumarka iyo dadka insku jinsiga ah ee hamadu isu qabato.
Posted at 6:35 23 Jul 20186:35 23 Jul 2018
Muxuu Ozil uga tagay xulka qaranka Jarmalka?
Mesut Ozil oo ah laacib khadka dhexe uga dheela kooxda Arsenal ayaa sheegay in uu go'aansaday in uusan mardambe u ciyaarin xulka qaranka ee dalka Jarmalka.
War qoraal ah oo uu soo saaray ciyaartoygan 29 jirka ah ayuu ku sheegay in sidii ay ula dhaqmeen Xiriirka Kubadda ee Jarmalka ay ku dhalisay "in uusan mardambe xiranin maaliyadda uu ku dheelo xulka Jarmalka".
Wuxuu sidoo kale sheegtay in lagu eedeeyay wajigabixii uu Jarmalku kala kulmay Koobka Adduunka.
Bishii May ayaa Ozil lagu dhaliilay in uu sawir la galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan mar ay isugu tageen xaflad London ka dhacday.
Ozil ayaa xalfaddaas ka qaybgalay isagoo uu ku weheliyo Ilkay Gundogan oo xulka qaranka ee Jarmalka ay iskala dheelaan. Ozil iyo Gundogan labadooduba asal ahaan waxay ka soo jeedaan Turkiga.
Warbixintan oo dhamaystiran si aad u akhrisato lifaaqan dhagsii.
Posted at 6:31 23 Jul 20186:31 23 Jul 2018
Alshabaab ayaa saaka weerartay saldhiga ciidanka dawladda iyo kuwa Jubaland ee Baar Sanguuni ee Woqooyiga Kismayo.
Weerarku wuxuu ku bilowday baabuur qarax lagu soo raray.
Qaraxaas ayaa dhacay abaaro lixdii subaxnimo, dadka deegaankuna waxay sheegeen in ay waxyar ka dib rasaas billaabatay ilaa toddobadii subaxnimada socotay.
Wali faahfaahin rasmi ah lagama hayo khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Posted at 6:25 23 Jul 20186:25 23 Jul 2018
Waa maalin Isniin ah oo ay taariikhdu tahay 23 Luulyo 2018ka.